Ny Huawei Mate Watch dia miloka amin'ny rafitra fiasany | Androidsis
rehefa Huawei nampiditra ny HarmonyOS , fantatra ihany koa amin'ny hoe HongMeng OS any Shina, dia nanazava fa ny smartwatch miaraka amin'ity rafitra fiasa ity dia ho tafiditra ao amin'ny sori-dalanany. Hatreto dia ny Honor Smart V no hany fitaovana tokana fa toa ny maodely manaraka hanana an'ity rafitra fiasa ity no ilay Huawei Mate Watch.
Ary dia, ny volana Mey lasa teo dia nanoratra ny marika Huawei Mate Watch i Huawei, milaza mazava fa miasa amin'ny famantaranandro marani-tsaina vaovao izy ireo. Ary eny, manana ny vato rehetra izy ho smartwatch voalohany miaraka amin'ny HarmonyOS.
Eny, ny Huawei Mate Watch hiara-miasa amin'ny HarmonyOS
Tsy fantatray ny volavola hananan'ity Huawei Mate Watch ity, saingy azontsika atao ny mieritreritra hoe rahoviana no hisy ilay fampisehoana. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria nanolotra ny Huawei Mate 30 ny mpanamboatra tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa, ho fanampin'ny tsy ampoizina anay amin'ny Huawei Watch GT2, smartwatch voalohany an'ny mpanamboatra miloka amin'ny processeur Kirin 1. azy ny vokany? Fahombiazana angovo mahavariana hampiakarana be ny fizakantenan'ity akanjo ity.
Mampalahelo fa zara raha manana vaovao momba an'ity Huawei Mate Watch ity izahay. Ny anarany ihany no voasoratra tamin'ny volana lasa teo tamin'ny CNIPA, ny National Intellectual Properties Administration of China. Saingy, azo inoana fa hahita ny hazavana eo akaikin'ny Mate 40 izy io.
Raha nitohy ny fandaharam-potoanan'i Huawei dia ny Mate Watch no rindrambaiko matanjaka HongMengOS voalohany, havoaka miaraka amin'ny andiany Mate 40.
tsaho milaza fa hitranga izany mandritra ny Fetim-pirenena Sinoa.?‍♂️ # HuaweiMate40Series #HuaweiMateWatch
- Teme (特米)? (@ RODENT950) Jona 23, 2020
Farany, lazao fa ny iray amin'ireo leaksters miaraka amin'ny voninahitra lehibe indrindra any Shina, dia nanome toky fa ity famantaranandro ity dia haseho amin'ny marika Mate, ary hisongadina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny HarmonyOS. Aza adino fa ny hevitra dia ny manampy tsikelikely fitaovana ...
Ny mazava dia ny maodely manaraka hanana an'ity rafitra fikirakirana ity dia ny smartwatch manaraka avy amin'ny orinasa Aziatika. Ary mitandrema, miaraka amin'ny Huawei Mate Watch, azon'izy ireo atao koa ny manaitra antsika amin'ny alàlan'ny Huawei Mate 40 izay misy HarmonyOS. Mendrika ve io safidy hafa amin'ny Android io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Huawei Mate Watch dia miloka amin'ny rafitra fiasany manokana